Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 30 March 2020	• 14 Comments
Kugadziridzwa kweCoronavirus: Rangarira pandakataura kuti hazvisati zvapfuura 6 Kubvumbi (ona pano semuenzaniso). Sezvakafanotaurwa, kuwedzerwa kwematanho kunoziviswa nhasi. Zvese zviri nyore kuona kuburikidza nekufungidzira nekuti tiri kupupurira master script. Kana iwe uchinge wanzwisisa iyo tenzi script, unogona zvakare […]
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 28 March 2020	• 26 Comments
Izvo zvakakosha kukurukura Q Anon zvakare, nekuti vazhinji vanoita sekutenda mune izvo mafaira eA An An anoti. Vanotenda kuti kune yakadzika nyika iyo Trump ichajekesa. Chirevo changu ndechekuti: Kune yakakura zvakadzama nzvimbo inosanganisira Trump na Q Anon. Iwo mutambo we […]
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 26 March 2020	• 17 Comments
Chinyorwa chakaitwa neNRC nhasi chinojekesa kuti kunyanya varume nevakuru vanofa kubva kukoronavirus. Quote kubva pachinyorwa ichi: Dambudziko rakakura neCovid-19 ndiyo inonzi cytokine dutu, inogona kuitika kana utachiona hwepnetioni ukanyanya. Iyo yakasimba isingadzore maitiro ekudzivirira kwemuviri kurwisa huwandu hukuru hwehutachiona, […]
Ndeupi kumeso kwechokwadi kwehutongi hunopararira kuburikidza nevezvematongerwo enyika uye vezvenhau pamwe chete nekushora kwakadzora? Wona chiratidzo chemuraraungu. Ko muraraungu iwo pachivande chiratidzo cheenyika nyowani here? Nyika izere nemafungu akasarudzika senge panguva yaNoa? Izvo zvakaonekwa zvekare […]
Kunyangwe hazvo Robert Jensen anoita kunge abva kumapato ezvematongerwo enyika akapfuura, achiri fanano mukuru waTrump. Mavhidhiyo ake parizvino akatariswa zvakanyanya, kungofanana neiyo nyeredzi nyowani mudenga; mukadzi anotenda maUFOs uye madenderedzwa ezvirimwa: Janet Ossebaard. Zvakanaka zviri mukati maro […]
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 24 March 2020	• 16 Comments
Pakatanga gore ra2020 ndakanzwa kunge rave gore rakaoma. Kuona nhanho dzekupedzisira dzakananga kuzere coronavirus covid-19 kukiya izvozvi kunopa imwe tariro kuti ichapera munguva pfupi. PaEvha dzeGore Idzva, ndakanyora kuti: "Sezvinei nezvangu, 2020 ichave iri gore revapambi uye munhu anoteedzera […]
Iyo Covid-19 Janet Ossebaard (zvirimwa zvinotenderera, Ninefornews) coronavirus zvinyorwa (ona pazasi) ndiwo musungo. Iwe unofanirwa kuziva kuti IBM yakadzika yeBlue Blue supercomputer yakakunda kubva kumakwikwi epasi rose Kasparov aine chess muna1996 uye Google Alphabet's Quantum Computer yakarova mukwikwidzi wepasi rose wemutambo wakaoma kwazvo Enda muna 2016. Mukuwedzera, iwe unofanirwa kuziva kuti […]
Munguva yeReddit 'bvunza chaunoda' musangano, Bill Gates akabvunzwa mubvunzo nezve covid-19 coronavirus dambudziko. Mhinduro yake yairatidza. Iye ndokuti, "Mukupedzisira, tichava nezvimwe zvitupa zvedigital kuratidza kuti ndiani anga achangogadziriswa kana kuedzwa uye ndiani akawana mushonga." Nezita zvitupa zveDigital, Bill anogona […]
Iyo coronavirus sezviri pachena inounza kuomeswa kukuru munharaunda. Iwe unogona kuona kuti pakurwisa kwese kwema media media kune wese munhu anoshinga kutaura imwe pfungwa. Usaite chikanganiso. Mumakore anopfuura manomwe andakanyora, ndawana kuti huwandu hwevarwi vechisimba vanoshandisa kirabhu yake mabhuru pane vanhu venhau […]
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 21 March 2020	• 25 Comments
Tinogona kumirira kuvharwa kwakazara muNetherlands. Kutaura kuno kwakaitwa naRutte naMambo Willem Alexander zviratidzo pamadziro uye vanonyanya kushandira kufadza vanhu nekupa fungidziro yekuti zvese zvichave zvakanaka. "Zvinogona kutora chinguva chidiki", saka ita […]
«Previous page - Peji inotevera »
Total Visits: 1.484.689